Technology | Rochak Khabar
पालमा बाइक र स्कुटर चलाउनेहरुको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा मात्र नभई पूरा संसारभरी इन्धनको समस्या लगातार बढिरहेको छ । दिन प्रतिदिन पेट्रोल डिजेलको मूल्यको चर्को बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । तपाईंको पैसा धेरैजसो पेट्रोलमा खर्च नहोस्...
21 Dec, 04:04 AM
कतै यसरी त चार्ज त गर्नुहुन्न आफ्नो स्मार्ट फोन ? थाहा पाउनुस् यी कुरा
स्मार्टफोनको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याट्रिको चार्जिङ नै हो । कहिले काँही राम्रोभन्दा राम्रो फोन ब्याट्रिमा समस्या आएपछि त्यो प्रयोगहिन हुन्छन् । यस्तोमा तपाईंले स्मार्टफोन चार्ज गर्नुपर्ने सहि तरिकाबारे थाहा पाउन जरुरी छ ।
21 Dec, 04:01 AM
आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा Porn Movie हेर्नु हुन्छ भने साबधान हुनुहोस इन्टरनेट पोर्न हेर्ने मानिसहरुको संख्या तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । कम्प्युटर तथा ल्यापटपका अलावा स्मार्टफोनबाट पनि धेरै मानिसहरु इन्टरनेटमा जोडिएका छन् ।
10 Dec, 03:19 AM
खबरदार, फिरौती माग्ने भाइरससँग बँच्नुस्
हामी सबैले आफ्नो कम्प्युटरमा तस्वीरहरु डाउनलोड गर्छौँ । तपाइँले यसरी इन्टरनेटबाट तस्वीरहरु डाउनलोड गर्ने क्रममा केही यस्ता तस्वीर भेट्नुभएको छ जो डाउनलोड नै हुन मान्दैनन् ? यदि यस्तो भोग्नुभएको छ भने सावधान । यो खतराको घण्टी हुनसक्छ ।
7 Dec, 03:41 AM
पावर बैंक किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् स्मार्टफोनको ब्याट्रीको ठूलो समस्या भनेको फूल चार्ज भएतापनि दिनभर बल्लतल्ल टिक्नु। त्यसका लागि अहिले एकमात्र सहज समाधान भनेको पावर बैंक किन्नु हो। पावर बैंकले मोबाइल र ट्याब्लेटलाई तीन चार पटकसम्म चार्ज गर्छ। बजारमा अहिले धेरै प्रकार पावर बैंक उपलब्ध छन्...
24 Nov, 02:49 AM
वाइफाई सिग्नल कमजोर भए के गर्ने ? जान्नुहोस्, तरिका इन्टरनेट प्रयोग गर्दा अधिकांशले भोग्नुपर्ने समस्या हो– वाइफाई सिग्नल कमजोर । एउटै घरमा कुनै कोठामा सिग्नल राम्रो देखाउँछ भने अर्को कोठामा कमजोर हुन्छ । 0
3 Nov, 11:38 AM
ह्याकर्सबाट कसरी सुरक्षित राख्ने आफ्नो अकाउण्ट ? जान्नुहोस् ५ टिप्स
सबैखाले अनलाइन अकाउन्टहरु पासवर्डबाटै सुरक्षित राखिएको हुन्छ । यी अनलाइन अकाउन्टमा महत्वपूर्ण डाटा स्टोर भएका हुन्छन् । सोही कारण ती डाटाको सुरक्षाका लागि अकाउन्ट सुरक्षित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । आफ्नो अकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न यी उपाय अपनाउनु लाभदायक हुन...
20 Oct, 02:35 AM
चाहेको ठाउँमा तात्ने अचम्मको रोबोट, यसले अब मान्छेले चाहेको ‘सम्पूर्ण यौन आनन्द’ दिने !
नेपालमा सेक्स डलको प्रयोग बाहिर आउने विषय भएन किनको हाम्रो समाज ‘लुकेको समाज’ हो । पश्चिमा समाजमा भने मान्छेहरू हामीभन्दा अल्लि खुलस्त छन् 0
9 Oct, 02:51 AM
तपाईंको मोबाइल ढिलो चार्ज हुन्छ ? छिटो चार्ज गर्न यसो गर्नुहोस्
आफ्नो मोबाइल ढिलो चार्ज हुने समस्याले तनावमा हुनुहुन्छ । यदि हो भने हामी तपाईंलाई यस्तै सजिलो तरिकाबारे बताउँदैछौं । आउनुहोस् थाहा पाऔंः
6 Oct, 01:55 AM
फेसबुकले ल्यायो मिनी मेसेन्जर एप ‘मेसेन्जर लाइट’
फेसबुकले पूरानो संस्करणका स्मार्टफोन प्रचलनमा रहेका तथा इन्टरनेट स्पीड पनि कम रहेका देशका प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै नयाँ भर्सनको फेसबुक मेसेन्जर एप सार्वजनिक गरेको छ ।
5 Oct, 03:27 AM
पोखरामा इन्जिनियरीङ पढ्ने विद्यार्थीले बनाए सोलारबाट चल्ने कार
पोखराको लामाचौरमा रहेको इन्जिनियरीङ अध्ययन सस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सोलारबाट चल्ले कार निमार्ण गरेर शुक्रबार प्रर्दशन गरेका छन् । क्याम्पसको मेकानिकल विभागमा अन्तरर्गतको चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सोलार कार निमार्ण गरेका...
1 Oct, 09:37 AM
मोबाइलको सिग्नल कम छ ? अपनाउनुहोस् यो तरिका मोबाइल फोनमा कुराकानी गर्दा कहिलेकाहीँ बिचमै लाइन काटिन्छ । अझ आवाज प्रष्ट नआउने समस्या त निकै धेरै बेहोरिरहेका हुन्छौँ हामी ।यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण मोबाइल सिग्नल कमजोर हुनु (चलनचल्तीको भाषामा टावर कम टिप्नु) हो ।
19 Sep, 11:30 AM
‘पाइन्टको गोजीमा मोवाइल राख्नु हुन्छ साबधान हुनुहोस अस्टेलियाको युनिर्भसिटी अफ क्यासलका वैज्ञानिकहरुको समूहले नयाँ समिक्षा गरेका हुन । विश्वको १४ प्रतिशत जनसंख्या बच्चा जन्माउन संघर्ष गरिरहेकै बेला गोजीमा राख्ने फोनको विकिरणले पुरुष स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
16 Sep, 03:48 AM
भाइबरबाट ५२ देशमा निशुल्क फोन गर्न सकिने
7 Sep, 01:35 PM
म्यासेन्जरमा थपियो नयाँ सुविधा
फेसबुकले म्यासेन्जर एपमा नयाँ फिचर थपिएको छ। इस फिचरको माध्यमबाट म्यासेन्जरमा प्रयोगकर्ताले ‘इन्स्ट्यान्ट भिडियो’ शेयर गर्न सक्नेछन्। यो भिडियो कलिङ फिचरभन्दा अलग भएको बताइएको छ। 0
3 Sep, 01:41 PM